လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွဲများ - Myanmar Network
လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွဲများ
Posted by Language Republic on July 20, 2015 at 11:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖော်နှစ်ယောက်ကြားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူအခြင်းခြင်း အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲအချို့နဲ့ သုံးနှုန်းပုံ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေကိုပါ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီစကားလုံးတွဲလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူနှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
ဥပမာ။ I get on really well with both of my brothers. (ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ညီနှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးကတော့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။)
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လူနှစ်ယောက် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် စကားများကြပြီး မခေါ် မပြောကြတော့ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြချင်လျှင်တော့ fall out လို့ သုံးပါတယ်။
ဥပမာ။ The brothers fell out over money. (ညီအစ်ကိုတွေတော့ ငွေကိစ္စနဲ့ စကားများပြီး မခေါ်မပြောကြတော့ဘူး။)
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးလာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ဟာ အဲ့ဒီအကြောင်းကို မကြာခဏဆိုသလို ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးထဲမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ခံစားရတဲ့ အခါပဲဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ အကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုတဲ့အခါ ဒီ စကားလုံးတွဲလေးတွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးမှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွဲ အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွဲတွေထဲက အချို့ဟာ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး အချို့ကတော့ ချစ်သူတွေကြားက ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အမြဲလိုလို အသုံးပြုနေကြ စကားလုံးတွဲတွေပါပဲ။
ကဲ တခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ ပထမဦးဆုံး တွေ့တဲ့ အကြောင်းကနေ စလိုက်ရအောင်။ ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့ချိန်မှာ ခင်မင်နှစ်သက်မိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ take to (သဘောကျ နှစ်သက်တယ်) လို့ သုံးပါတယ်။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် မနှစ်မြို့ဘူး ဆိုလျှင်လည်း take against လို့ သုံးပါတယ်။
ဥပမာ။ I hadn't met Jamie's girlfriend before but I really took to her. I thought she was lovely. (ငါ Jamie ရဲ့ကောင်မလေးကို အရင်က တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ကောင်မလေးကို ငါ သဘောကျတယ်။ သူမက ချစ်စရာကောင်းမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။)
Tom took against Rebecca because she said something mean about his friend. (Tom က Rebecca ကို သဘောမကျဘူး။ သူမက သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ မကောင်းကြောင်းတွေပြောလို့လေ။)
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တွေ့ ချင်းမှာပဲ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားကြပြီး၊ အရမ်းသဘောကျ နှစ်ခြိုက်သွားတဲ့အခါမှာ သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့ စကားလုံးတွဲလေးကိုလဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါက hit it off ပါ။ (သတိထားရမှာတစ်ခုက it က ဒီစကားလုံးတွဲမှာ အတွဲလိုက်ထည့်သုံးရမှာနော်။)
ဥပမာ။ I introduced Jake to Ollie and they really hit it off. (ငါ Jake နဲ့ Ollie တို့နှစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ ချက်ချင်းကို ရင်းနှီးသွားတော့တာပဲ။)
အခုပဲတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သဘောမကျတဲ့အခါမှာဆိုရင် put off လို့သုံးပါတယ်။
ဥပမာ။ Kate's husband was very rude to our waiter and it put me off himabit. (Kate ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်က ငါတို့စားပွဲထိုးအပေါ် အတော်ရိုင်းရိုင်းပြပြ ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါတော့ သူ့ကို သိပ်သဘောမကျဘူး။)
ကဲ ခုတော့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောတဲ့ စကားလုံးတွဲတွေ အကြောင်းပြောကြရအောင်။ ကျွန်မတို့ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာ ရုတ်တရက် စွဲလန်းသဘောကျသွားတဲ့ အခါမှာ fall for လို့ သုံးပါတယ်။
ဥပမာ။ Dan was good-looking and charming and I just fell for him. (Dam က အရမ်းကြည့်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ငါသူ့ကိုတော့ သဘောကျမိနေပြီ။)
လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ အရမ်းကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိနေပြီ ဆိုလျှင် ပြောနေကြ စကားလုံးတွဲလေးကတော့ going out (together) ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ Ava and Isaac have been going out for overayear now.(Ava နဲ့ Isaac တို့နှစ်ယောက်တွဲနေကြတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။)
စုံတွဲနှစ်ယောက်ကြားမှာ စကားများရန်ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက အဆင်မပြေတော့တဲ့ အခါမျိုးမှာဆိုလျှင်တော့ go through လို့သုံးပါတယ်။ go throughabad patch လို့လဲ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။
ဥပမာ။ Charles and Sophie went throughabad patchawhile back, but I think they are over it now. (Charles နဲ့ Sophie တို့နှစ်ယောက် ခဏတော့ အဆင်မပြေဖြစ်သွားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားပြီထင်တယ်။)
တကယ်လို့ စုံတွဲနှစ်ယောက်ကြားမှာ တဖြည်းဖြည်းနီးစပ်မှုတွေ လျှော့နည်းလာပြီး နောက်ဆုံး သူတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုတွေ အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ drift apart ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွဲကို သုံးပါတယ်။
ဥပမာ။ There was no big argument- we just gradually drifted apart. (ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြသနာကြီးကြီးမားမားတော့ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းသွေးအေးသွားကြတာ။)
လက်ထပ်ထားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေနဲ့ စုံတွဲတွေကြားမှာ လမ်းခွဲပြတ်စဲကြပြီဆိုရင်တော့ split up (သို့မဟုတ်) break up လို့သုံးပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတော့ အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရအောင်နော်။ အဲ့တော့ ချစ်သူတွေ ဇနီးမောင်နှံတွေကြားမှာ ပြသနာတွေအေးချမ်းသွားပြီး ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပြီဆိုရင်တော့ make up လို့သုံးပါတယ် ဆိုတာလေးနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်။
၁။ get on - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သည်။
၂။ fall out- စကားများ၊ ရန်ဖြစ်ပြီး အခေါ်မပြောဖြစ်သွားသည်။
၃။ take to - သဘောကျ နှစ်သက်သည်။
၄။ take against - မနှစ်မြို့၊ မနှစ်ခြိုက်ဖြစ်သွားသည်။
၅။ hit it off- တွေ့တွေ့ခြင်း ခင်မင်မိသည်။
၆။ put off- တွေ့တွေ့ချင်း သဘောမကျဖြစ်မိသည်။
၇။ fall for- ရုတ်တရက် စွဲလန်းချစ်မိသွားသည်။
၈။ going out- အတူတူတွဲနေကြပြီ
၉။ go through/ go throughabad path - ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်သည်။
၁၀။ drift apart- ဆက်ဆံရေး ကျဲသွားသည်။
၁၁။ split up/ break up- လမ်းခွဲပြတ်စဲသွားသည်။
၁၂။ make up- ပြန်လည် အဆင်ပြေသွားသည်။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ We don’t really get on. (Phrasal verbs for describing relationships) ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိတျဆှသေူငယျခငျြးနှဈယောကျကွားမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ အဖျောနှဈယောကျကွားမှာပဲ ဖွဈဖွဈ လူအခွငျးခွငျး အပွနျအလှနျ ဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ အင်ျဂလိပျစကားလုံးတှဲအခြို့နဲ့ သုံးနှုနျးပုံ၊ အဓိပ်ပါယျတှကေိုပါ ပွောပွခငျြပါတယျ။
ဒီစကားလုံးတှဲလေးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကတော့ လူနှဈယောကျကွားက ဆကျဆံရေးဟာ အရမျးကို ကောငျးမှနျနတေယျလို့ ပွောခငျြတာပါ။
ဥပမာ။ I get on really well with both of my brothers. (ကြှနျတျောနဲ့ ကြှနျတေျာ့ညီနှဈယောကျကွားက ဆကျဆံရေးကတော့ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။)
တဈခြိနျတညျးမှာပဲ လူနှဈယောကျ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ စကားမြားကွပွီး မချေါ မပွောကွတော့ဘူးဆိုတာကို ဖျောပွခငျြလြှငျတော့ fall out လို့ သုံးပါတယျ။
ဥပမာ။ The brothers fell out over money. (ညီအဈကိုတှတေော့ ငှကေိစ်စနဲ့ စကားမြားပွီး မချေါမပွောကွတော့ဘူး။)
တဈဦးနှငျ့ တဈဦးဆကျဆံရေးဟာ သိပျကို အရေးကွီးလာတဲ့အခါ ကြှနျမတို့ဟာ အဲ့ဒီအကွောငျးကို မကွာခဏဆိုသလို ပွောတတျကွပါတယျ။ အဲဒီလို အပွနျအလှနျဆကျဆံရေးထဲမှာ တဈဦးတဈယောကျနဲ့ ပတျသတျလို့ ခံစားရတဲ့ အခါပဲဖွဈစေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ ဆကျဆံရေးမှာ အကွောငျးတဈခုခုပျေါလာတဲ့အခါမှာဖွဈစေ ရငျဖှငျ့ပွောဆိုတဲ့အခါ ဒီ စကားလုံးတှဲလေးတှကေို အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ ဒီတဈပတျမှာတော့ အပွနျအလှနျ ဆကျဆံရေးမှာ အသုံးအမြားဆုံး ဖွဈတဲ့ စကားလုံးတှဲ အခြို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ဒီစကားလုံးတှဲတှထေဲက အခြို့ဟာ မိတျဆှေ၊ သူငယျခငျြး၊ မိသားစု ဆကျဆံရေးအတှကျဖွဈပွီး အခြို့ကတော့ ခဈြသူတှကွေားက ဆကျဆံရေးကို ဖျောပွတဲ့နရောမှာ သုံးပါတယျ။ အားလုံးကတော့ အမွဲလိုလို အသုံးပွုနကွေ စကားလုံးတှဲတှပေါပဲ။
ကဲ တခွားလူတဈယောကျနဲ့ ပထမဦးဆုံး တှတေဲ့ အကွောငျးကနေ စလိုကျရအောငျ။ ကိုယျက လူတဈယောကျကို စတှခြေိ့နျမှာ ခငျမငျနှဈသကျမိတယျဆိုပါစို့။ အဲ့လိုအခါမြိုးမှာ take to (သဘောကြ နှဈသကျတယျ) လို့ သုံးပါတယျ။ အကွောငျးတခုခုကွောငျ့ မနှဈမွို့ဘူး ဆိုလြှငျလညျး take against လို့ သုံးပါတယျ။
ဥပမာ။ I hadn't met Jamie's girlfriend before but I really took to her. I thought she was lovely. (ငါ Jamie ရဲ့ကောငျမလေးကို အရငျက တဈခါမှမတှခေဲ့ဖူးပမေဲ့ ကောငျမလေးကို ငါ သဘောကတြယျ။ သူမက ခဈြစရာကောငျးမယျလို့ငါထငျခဲ့တယျ။)
Tom took against Rebecca because she said something mean about his friend. (Tom က Rebecca ကို သဘောမကဘြူး။ သူမက သူ့သူငယျခငျြးရဲ့ မကောငျးကွောငျးတှပွေောလို့လေ။)
တဈခါတဈရံမှာ လူတဈယောကျနဲ့ တှတှေ့ေ့ ခငျြးမှာပဲ မိတျဆှတှေေ ဖွဈသှားကွပွီး၊ အရမျးသဘောကြ နှဈခွိုကျသှားတဲ့အခါမှာ သုံးနကေမြဟုတျတဲ့ စကားလုံးတှဲလေးကိုလဲ သုံးတတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒါက hit it off ပါ။ (သတိထားရမှာတဈခုက it က ဒီစကားလုံးတှဲမှာ အတှဲလိုကျထညျ့သုံးရမှာနျော။)
ဥပမာ။ I introduced Jake to Ollie and they really hit it off. (ငါ Jake နဲ့ Ollie တို့နှဈယောကျကို မိတျဆကျပေးလိုကျတာ ခကျြခငျြးကို ရငျးနှီးသှားတော့တာပဲ။)
အခုပဲတှတေဲ့လူတဈယောကျကို အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သဘောမကတြဲ့အခါမှာဆိုရငျ put off လို့သုံးပါတယျ။
ဥပမာ။ Kate's husband was very rude to our waiter and it put me off himabit. (Kate ရဲ့ ခငျပှနျးသညျက ငါတို့စားပှဲထိုးအပျေါ အတျောရိုငျးရိုငျးပွပွ ဆကျဆံခဲ့တယျ။ ငါတော့ သူ့ကို သိပျသဘောမကဘြူး။)
ကဲ ခုတော့ ခဈြသူနှဈဦးကွား ဆကျဆံရေးအကွောငျးပွောတဲ့ စကားလုံးတှဲတှေ အကွောငျးပွောကွရအောငျ။ ကြှနျမတို့ဟာ တဈစုံတဈယောကျအပျေါမှာ ရုတျတရကျ စှဲလနျးသဘောကသြှားတဲ့ အခါမှာ fall for လို့ သုံးပါတယျ။
ဥပမာ။ Dan was good-looking and charming and I just fell for him. (Dam က အရမျးကွညျ့ကောငျးပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတယျ။ ငါသူ့ကိုတော့ သဘောကမြိနပွေီ။)
လူနှဈယောကျကွားမှာ အရမျးကို ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိနပွေီ ဆိုလြှငျ ပွောနကွေ စကားလုံးတှဲလေးကတော့ going out (together) ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ။ Ava and Isaac have been going out for overayear now.(Ava နဲ့ Isaac တို့နှဈယောကျတှဲနကွေတာ တဈနှဈကြျောသှားပွီ။)
စုံတှဲနှဈယောကျကွားမှာ စကားမြားရနျဖွဈကွပွီး သူတို့ရဲ့ဆကျဆံရေးက အဆငျမပွတေော့တဲ့ အခါမြိုးမှာဆိုလြှငျတော့ go through လို့သုံးပါတယျ။ go throughabad patch လို့လဲ သုံးလို့ရပါသေးတယျ။
ဥပမာ။ Charles and Sophie went throughabad patchawhile back, but I think they are over it now. (Charles နဲ့ Sophie တို့နှဈယောကျ ခဏတော့ အဆငျမပွဖွေဈသှားကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုတော့ ပွနျအဆငျပွသှေားပွီထငျတယျ။)
တကယျလို့ စုံတှဲနှဈယောကျကွားမှာ တဖွညျးဖွညျးနီးစပျမှုတှေ လြှော့နညျးလာပွီး နောကျဆုံး သူတို့ရဲ့ပတျသကျမှုတှေ အဆုံးသတျသှားတဲ့အခါမှာဆိုရငျတော့ drift apart ဆိုတဲ့ စကားလုံးတှဲကို သုံးပါတယျ။
ဥပမာ။ There was no big argument- we just gradually drifted apart. (ငါတို့နှဈယောကျကွားမှာ ပွသနာကွီးကွီးမားမားတော့ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ တဖွညျးဖွညျးသှေးအေးသှားကွတာ။)
လကျထပျထားတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှနေဲ့ စုံတှဲတှကွေားမှာ လမျးခှဲပွတျစဲကွပွီဆိုရငျတော့ split up (သို့မဟုတျ) break up လို့သုံးပါတယျ။
ဒီသငျခနျးစာလေးကိုတော့ အပေါငျးလက်ခဏာနဲ့ပဲ အဆုံးသတျရအောငျနျော။ အဲ့တော့ ခဈြသူတှေ ဇနီးမောငျနှံတှကွေားမှာ ပွသနာတှအေေးခမျြးသှားပွီး ပွနျအဆငျပွသှေားကွပွီဆိုရငျတော့ make up လို့သုံးပါတယျ ဆိုတာလေးနဲ့ ဒီသငျခနျးစာကို အဆုံးသတျလိုကျပါတယျကှယျ။
၁။ get on - ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျသညျ။
၂။ fall out- စကားမြား၊ ရနျဖွဈပွီး အချေါမပွောဖွဈသှားသညျ။
၃။ take to - သဘောကြ နှဈသကျသညျ။
၄။ take against - မနှဈမွို့၊ မနှဈခွိုကျဖွဈသှားသညျ။
၅။ hit it off- တှတှေ့ခွေ့ငျး ခငျမငျမိသညျ။
၆။ put off- တှတှေ့ခေ့ငျြး သဘောမကဖြွဈမိသညျ။
၇။ fall for- ရုတျတရကျ စှဲလနျးခဈြမိသှားသညျ။
၈။ going out- အတူတူတှဲနကွေပွီ
၉။ go through/ go throughabad path - ဆကျဆံရေး အဆငျမပွဖွေဈသညျ။
၁၀။ drift apart- ဆကျဆံရေး ကြဲသှားသညျ။
၁၁။ split up/ break up- လမျးခှဲပွတျစဲသှားသညျ။
၁၂။ make up- ပွနျလညျ အဆငျပွသှေားသညျ။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ၏ We don’t really get on. (Phrasal verbs for describing relationships) ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by myinthlaing on July 20, 2015 at 16:21
ှုI really took to you when I saw your posts
Permalink Reply by Myat Mon on July 21, 2015 at 10:23
I want to know meaning of "get alone"
Permalink Reply by theintunzaw on July 22, 2015 at 7:56
Permalink Reply by San Myat on July 23, 2015 at 14:44
Permalink Reply by Nyein Chan Maung on July 24, 2015 at 23:12
Permalink Reply by thet paing on July 25, 2015 at 17:17
Permalink Reply by thinkhaingsoe on July 26, 2015 at 20:56
Permalink Reply by Mya Nandar on July 27, 2015 at 18:48